Mabasa 17 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
17 Zvino vakaenda nomuAmfiporisi neAporoniya, vakasvika kuTesaronika,+ kwaiva nesinagogi revaJudha.
2 Naizvozvo maererano netsika yaPauro+ akapinda mavaiva, uye kwemasabata matatu akakurukurirana navo achishandisa Magwaro,+
3 achitsanangura uye achiratidza nezvakanyorwa kuti zvakanga zvakakodzera kuti Kristu atambure+ uye kuti amuke kubva kuvakafa,+ uye achiti: “Uyu ndiye Kristu,+ uyu Jesu wandiri kukuparidzirai.”
4 Nokuda kwaizvozvo vamwe vavo vakava vatendi,+ vakabatana naPauro naSirasi,+ uye vanhu vazhinjizhinji vevaGiriki vainamata Mwari nevakadzi vazhinji vakakurumbira vakadarowo.
5 Asi vaJudha, vachinzwa godo,+ vakatora vamwe varume vakaipa vepamusika, vanhu vakanga vasina zvavanobatsira kuti vave navo, vakaumba boka rakanyongana, vakaita kuti guta riite mheremhere.+ Vakarwisa imba yaJasoni,+ vakatanga kutsvaka kuti vabudisirwe kumhomho.
6 Pavakavashayiwa, vakazvuzvurudzira Jasoni nedzimwe hama kuvatongi veguta, vachishevedzera kuti: “Vanhu ava vanyonganisa+ nyika inogarwa varipowo pano,
7 uye Jasoni avagamuchira nomutsa. Varume vose ivava vanoita zvinopesana+ nemirayiro yaKesari, vachiti kune mumwe mambo,+ anonzi Jesu.”
8 Chokwadi vakashatirisa boka revanhu nevatongi veguta pavakanzwa zvinhu izvi;
9 uye pashure pokunge vatora chokumbofanobata chakakwana kuna Jasoni nevamwe, vakavarega vachienda.
10 Hama dzakabva dzaendesa Pauro naSirasi kuBheriya usiku,+ uye ava, pavakasvika, vakapinda musinagogi revaJudha.
11 Zvino ava vakanga vaine pfungwa dzakanaka kupfuura vaya vokuTesaronika, nokuti vakagamuchira shoko nepfungwa dzinoda kwazvo, vachinyatsoongorora+ Magwaro+ zuva nezuva kana zvinhu izvi zvakanga zvakadaro.+
12 Naizvozvo vazhinji vavo vakava vatendi, uye ndizvo zvakaitawo vakadzi vazhinji vechiGiriki vaiva nomukurumbira wakanaka+ pamwe chete nevarume vazhinji.
13 Asi vaJudha vokuTesaronika pavakaziva kuti shoko raMwari rakaparidzwawo muBheriya naPauro, vakaendawo ikoko kuti vakurudzire+ mapoka nokushatirisa+ mhomho yevanhu.
14 Hama dzakabva dzakurumidza kuendesa Pauro kure kugungwa;+ asi Sirasi naTimoti vakasara imomo.
15 Zvisinei, vaya vaiperekedza Pauro vakamusvitsa kuAtene uye, varayirwa kuti Sirasi naTimoti+ vakurumidze kuuya kwaari sezvavaigona, ivo vakaenda.
16 Zvino Pauro zvaakanga akavamirira muAtene, iye akashatiriswa mumwoyo make+ paakaona kuti guta rakanga rakazara nezvidhori.
17 Naizvozvo akatanga kukurukurirana nevaJudha+ musinagogi nevamwe vanhu vainamata Mwari uye mazuva ose pamusika+ nevaya vaivapo.
18 Asi vamwe vazivi+ vevaEpikuro nevaStoiki vakatanga kutaura naye vachiita nharo, uye vamwe vaiti: “Munhu uyu anotaura zvisina zvazvinobatsira anoda kutaurei?”+ Vamwe vachiti: “Anenge muparidzi wavanamwari vokune imwe nyika.” Iyi yaiva mhosva yokuti akanga achizivisa mashoko akanaka aJesu norumuko.+
19 Naizvozvo vakamubata, vakaenda naye kuAreyopago, vachiti: “Tingagona here kuziva kuti kudzidzisa uku kutsva+ ndokwei kwauri kutaura?
20 Nokuti uri kuuya nezvinhu zvitsva munzeve dzedu. Naizvozvo tinoda kusvika pakuziva kuti zvinhu izvi zvinorevei.”+
21 Chokwadi, vaAtene vose nevagari vokune dzimwe nyika vaigara imomo kwenguva pfupi vaisapedza nguva yavo yokuzorora pasina chavaiita asi vachitaura kana kuteerera chimwe chinhu chitsva.
22 Zvino Pauro akamira pakati peAreyopago,+ akati:
“Vanhu vomuAtene, ndinoona kuti muzvinhu zvose munoita sokuti munotya vanamwari+ kwazvo kupfuura zvinoita vamwe.
23 Somuenzaniso, pandakanga ndichipfuura ndichinyatsocherechedza zvinhu zvamunonamata, ndakawana atari yakanga yakanyorwa kuti ‘Kuna Mwari Asingazivikanwi.’ Naizvozvo chamuri kuzvipira kwachiri saMwari musingazivi, ndicho chandiri kukuparidzirai.
24 Mwari akaita nyika nezvinhu zvose zviri mairi, Iyeyu zvaari Ishe wedenga nenyika,+ haagari mutemberi dzakaitwa nemaoko,+
25 uyewo haashandirwi nemaoko evanhu sokunge kuti pane chimwe chinhu chaanoshayiwa,+ nokuti iye anopa vanhu vose upenyu+ nemhepo yokufema+ nezvinhu zvose.
26 Akaita marudzi ose+ evanhu kubva pamunhu+ mumwe chete, kuti agare pamusoro penyika yose,+ uye akatema nguva dzakatarwa+ nemiganhu yakaiswa yokugara kwevanhu,+
27 kuti vatsvake Mwari,+ vamutsvangadzire, vamuwane,+ chokwadi, kunyange zvazvo asiri kure nomumwe nomumwe wedu.
28 Nokuti naye tine upenyu, tinofamba uye tiripo,+ sezvakataurwa nevamwe vadetembi+ vari pakati penyu kuti, ‘Nokuti tiri chizvarwa chakewo.’
29 “Naizvozvo, zvatiri vana vaMwari,+ hatifaniri kufunga kuti Mwari+ akafanana nendarama kana sirivha kana dombo, kufanana nechimwe chinhu chakavezwa nounyanzvi nouchenjeri hwomunhu.+
30 Chokwadi, Mwari akafuratira nguva dzokusaziva+ kwakadaro, asi zvino ari kuudza vanhu kuti kwose kwose vose vanofanira kupfidza.+
31 Nokuti akatara zuva raanoda kutonga+ naro nyika inogarwa, nokururama achishandisa munhu waakagadza, uye akapa vimbiso kuvanhu vose pakuti akamumutsa+ kubva kuvakafa.”
32 Naizvozvo, pavakanzwa nezvokumuka kwevakafa, vamwe vakatanga kuseka,+ asi vamwe vakati: “Tichakunzwa pamusoro paizvozvi pane imwe nguva.”
33 Nokudaro Pauro akabuda pakati pavo,
34 asi vamwe vanhu vakabatana naye, vakava vatendi, pakati pavo paivawo naDhiyonisiyo, mutongi wedare reAreyopago,+ uye mukadzi ainzi Dhamarisi, nevamwe kunze kwavo.